အိမ် - စျးတန် လုံးချင်း. ရောင်းမည် / ငှားမည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: စျးတန် လုံးချင်း. ရောင်းမည် / ငှားမည်
#ေ စျးတန် လုံးချင်း. ရောင်းမည် / ငှားမည် _မရမ်းကုန်းမြို့နယ် _၈မိူင်ခွဲ အနီး /ေကျာက်ေ ရတွင်း အနီး _စွယ်ေ တ်ာဘုရား ဘက်မှ ဝင်လို့ရ _50 x 90(Land Area) _40 x 40(HouseArea) _3Master Room _LivingRoom _DinningRoom _KitchenRoom _ပါကေးခင်း _အသင့်နေ _လမ်းသွယ်/လမ်းသန့် _ဂရံအမည်ေ ပါက် #အငှားစျေးနှုန်း ၂၅သိန်း #အေ ရာင်းစျေးနှုန်း ၅၇၀၀သိန်း ဆက်သွယ်ရန် 09 799017250
SONY မြယမုံအိမ်ယာ လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည် / ဌားမ
အရွယ်အစား 9000.00 Square Feet
𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐅𝐨𝐫 𝐑𝐞𝐧𝐭